Shan Weerar Oo Ka Dhacay Gobalka NFD+Askar Kenyaati Ah Oo Lagu Dilay. – Calamada.com
Shan Weerar Oo Ka Dhacay Gobalka NFD+Askar Kenyaati Ah Oo Lagu Dilay.
calamada June 15, 2019 1 min read
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey Saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen deegaano kala duwan oo ka tirsan Gobalka NFD oo ka mid ah dhulka Kenya xooga kaga heysata Somalia.
Weerarka Kowaad :waa qarax ka dhacay inta u dhaxeeysa Deegaanada “Qorad Xareer” iyo “Konton” oo wada hoos taga “Wajeer” waxaa lala beegsaday gaari Kooyal ah gaarigii halkaasi ayuu ku basbeelay.
inta la xaqiijiyay waxaa weerarkaasi ku dhintay (10) Toban Askari oo Kenyaati ah, halka Mujaahidiinta ay soo qaniimeysteen Toban Qori.
Weerarka Labaad waa Qarax isagana waxaa lala beegsaday Gaari Mutabiish ah oo Sahay waday kaasi oo ka soo baxay Deegaan la yiraahdo “Kulan” islamarkaana ku sii jeeday “Libooya” oo hoos tagta “Gaarisa”, gaarigii waa basbeelay, waxaana sii qaraxday Sahaydii uu waday, Askartii saarneed dhimasho iyo dhaawac ayay ku noqdeen .
Howlgalka Saddex-aad Mujaahidiinta waxay Saacadihii la soo dhaafay weerar ku qaadeen Saldhig Ciidanka Kenya ay ku leeyihiin Deegaanka “Boojo-garas” oo hoos tagta Wajeer, Hal Askari ayaa lagu dilay Qorigiina waa laga qaatay.
Weerarka Afaraad ayaa ka dhacay Deegaan lagu magacaabo “Sh Barow” oo hoos taga Mandheera, waxaa halkaasi lagu qarxiyay gaari Booyad ah oo Malatariga Kenya ay la haayeen , goobta ayuu ku basbeelay gaarigaasi, wixii saarnaana dhimasho iyo dhaawac ayay ku noqdeen .
Howlgalka Shanaad Mujaahidiinta ayaa Saacadihii la soo dhaafay waxay la wareegeen Deegaanka lagu magacaabo “Falama” oo hoos taga Mandheera, Mujaahidiinta waxay u khudbeeyeen dadka deegaanka markii ay Magaalada qabsadeen, halkaasina waxaa iskaga cararay Ciidanka Kenya.
Previous: Faahfaahin Laga Helayo Qaraxyada Muqdisho.
Next: Akhriso Xog Dheeraad Ah Oo Laga Helay Qaraxyada Muqdisho.